Ungayinyusa Kanjani Ukuthengisa ku-amazon ngo-2021 | Iseluleko Isazi | Amathiphu namasu
Iseluleko sochwepheshe sendlela yokwengeza ukuthengisa ku-Amazon ngo-2021
Ngabe ubukade ugijima "Ungakhuphula Kanjani Ukuthengisa ku-Amazon ngo-2021?”Lokhu akumangazi ukuthi ngenkathi ICoronavirus kuthinte umhlaba, ukuthengisa e-Amazon kukhuphuke kakhulu. Futhi, lokhu bekuyinto obekufanele yenzeke. Noma, obekungalindelwe umncintiswano onzima umuntu obekufanele abhekane nawo ukufinyelela ezingeni noma ukuwusimamisela uhlu lomkhiqizo. Yebo, lapha kule ndatshana sizamile ukuthola iseluleko sochwepheshe esingcono kakhulu sendlela yokuthuthukisa ukuthengisa okuningi ku-Amazon. Ngakho-ke ake singene shi kule ndaba futhi sifunde ukukhulisa ukuthengisa kwakho ku-Amazon.
Amathiphu okuthi Ungakhuphula Kanjani Ukuthengisa ku-amazon
I-Amazon ekubeni yipulatifomu emangalisayo yinhle kakhulu. Umuntu angasho nje ukuthi iyinjini yokusesha yokuthola imikhiqizo ehlukile futhi ephoqelelayo emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi uhlelo selusukile ku-zero lwaya ekugcineni futhi inani lomsebenzi umuntu angalenza ukwenza ngcono alinayo imingcele. Lokhu kuphakamisa hhayi eyodwa noma ezimbili kepha amathiphu amaningi namasu ukukhulisa ukuthengisa ku-Amazon. Ngakho-ke ngaphandle kokulinda ngokuqhubekayo ake siqale ukufunda amathiphu amahle kakhulu ungakhuphula kanjani ukuthengisa ku-Amazon:
Lungiselela isihloko sencazelo nesihloko
Uma ukhumbula izichazamazwi ezindala, noma uma wazi nje ngazo. Indlela yokuthola incazelo yendlela ethile kwakuyinqubo. Umuntu kufanele aqale kuqala ukubheka ngohlamvu lokuqala lwegama bese eya kulandelana ngaphandle kokuthi afinyelele emphumeleni wokugcina. Lokhu kuyafana nokusesha.
Lapho othile engena kumkhiqizo othile, noma uhlobo oluthile lomkhiqizo, i-algorithm yokusesha ye-Amazon imane ifune isihloko somkhiqizo nencazelo esondele kakhulu kulokho okuseshwayo. Le ukuphela kwendlela umshini okwazi ngayo ukwenza usesho okungenani okwamanje. Noma, kunezinqubo zokucinga ezithuthukile kepha azisebenzi ku-Amazon (okungenani okwamanje).
Amathiphu wokubhala isihloko
Ngakho iphuzu lale ngxoxo ukukwenza ugxile esihlokweni nasencazelweni yomkhiqizo wakho. Kudinga ukuthi ibe mnandi futhi idinga ukuba neqiniso. Lezi imihlahlandlela eyisisekelo emibili yesihloko esisebenzayo se-Amazon Product kanye nencazelo yoMkhiqizo. Ngaphandle kwalokho angavele asebenzise ifomula ye- Igama lomkhiqizo + Izici Zomkhiqizo ngesihloko. Lokhu kusebenza kahle impela futhi kunembile.
Amathiphu wokubhala Incazelo
Ngencazelo yomkhiqizo qiniseka ukuthi usho zonke izici. Yebo, yizici ezisuselwa lapho amakhasimende aqhathanisa khona imikhiqizo. Sebenzisa amaphuzu wezinhlamvu ukuze uxhumane kangcono nezici. Futhi khuluma iqiniso ngayo. Lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye amagama afana ne-Great, Awesome, best njll ngoba avele anamathele ebuchosheni bethu bokuqala lapho eqhathanisa izinto. Kepha, iphuzu lokutshela lokhu ukuthi akufanele ufune noma yini umkhiqizo wakho ongakwazi ukukunikeza. Uma lokhu kwenzeka kuzoba nembuyiselo ethe xaxa kunokuthenga futhi amakhasimende ekupheleni kosuku azoshiya izibuyekezo ezingezinhle. Futhi incazelo engeyinhle ingavele imise izinga lomkhiqizo wakho ngesikhathi sokusesha ikwenze kube nzima kuwe ukufinyelela kumanani wokuthengisa aphezulu.
Bhalisa i-Brand yakho bese une-Logo
Ubudlelwano bezimpawu zokuthengisa namalogo omkhiqizo buqonde ngqo embonweni wethu wokubuka nokukhumbula inkumbulo. Kunemikhiqizo eminingi edumile ebuchosheni bethu ehambisana nama-logo. Futhi, inhloso yokusungula umkhiqizo ukuthola ukwethembeka okwengeziwe. Cabanga ngakho kanjena, kungenzeka ukuthi uthenge kumuntu omaziyo bese ungamazi. Kubalulekile ukuthi umkhiqizo onawo ubhaliswe ngoba ukukunikeza lokho kuluma okwengeziwe kokwethembana. Ngaphandle kwalokho kunezinye izinzuzo futhi. Isibonelo, cishe acishe amathuba okuthi umuntu athengise umkhiqizo ngaphansi kwegama lakho lomkhiqizo. Futhi uma lokhu kwenzeka, ungabamangalela. Ngaphandle kwalokho kukunikeza ukufinyelela kokuqukethwe kwe-A + enkabeni yomthengisi. Isici singabhekwa ohlwini lokudonsela phansi lokukhangisa futhi sinamandla kakhulu ngokwendlela yombhalo omsulwa. Kungakusiza ukuthi umkhiqizo wakho ubonakale ungcono kunalabo abasebenzisa umbhalo nje.
Wake wezwa ngenkulumo ethi "Umthengi uyiNkosi", uma kunjalo yebo kuhlale kubalulekile ukuqonda ukuthi bafunani. E-Amazon, ukubuyekezwa kumkhiqizo wakho kuyizinkomba eziyinhloko zekhwalithi. Kubalulekile ukuthi uzame ukuthola izibuyekezo ezinhle ngangokunokwenzeka. Kepha ngakolunye uhlangothi, uma ufisa ngempela ukuphumelela sebenzela ukugxeka okunikeziwe nakho. Ayikho enye indlela engcono yokwenza ngcono insizakalo yakho ngaphandle kokuqonda nje ukuthi ikhasimende lidinga ini kuwe. Futhi, indlela elula yokuyazi ngokunikeza ukubheka okuhle ngempendulo. Lokhu ngeke kukwenze umthengisi omuhle kakhulu kepha kuzokusiza nokuthi wandise i-Amazon Sales.
Umncintiswano ungaba umlingani wakho omkhulu nesitha sakho. Bangakutshela okufanele ukwenze ngokulungile nokuthi yini okungahambanga kahle. Ukuze uhlale phambili, kubalulekile ukuthi unake abantu abakleliswe kangcono kunawe ohlwini. Futhi, umuntu angathatha ezingeni eliphansi futhi agweme abakwenzayo. Ukugijima ngempumelelo kudinga imithwalo ye-intel futhi ukutadisha ukuncintisana kwakho kuyindlela engcono yokwenza. Ngaphandle kwalokho kunezinkinga ezibucayi futhi. Ngokwesibonelo, kulezi zinsuku ukudunwa kwemoto kuyinkinga evamile. Eqinisweni, kukhona abanye abathengisi abangavele bazame ukonakalisa uhlu lwakho. Ukuze ufunde kabanzi ngamasu angcolile ku-Amazon, ungachofoza kusixhumanisi lapha. Futhi, abantu abaningi basebenzisa ama-SKU futhi kuyinto enhle. Noma, lokhu kungakulimaza ngempela uma ukusebenzisela umkhankaso wokukhuthaza. Izimbangi zingakwazi ukuqaphela inkatho futhi zinciphise amanani ngaphezulu ukuze zinikeze umkhiqizo wazo ithuba lokuncintisana.
Uma kungenzeka, uma ungazi, kungukuhlonza okuhlukile Ikhodi lokho kusetshenziswa ngabathengisi ngomkhiqizo wabo ohlwini lwempahla. Kufana nokunikeza uphawu esabelweni esitholakalayo kuhlu lwakho.
Shintsha Amanani Omkhiqizo
Umuntu kungenzeka ukubonile lokhu, kunamakhasi amaningi kakhulu lapho intengo ye-smartphone imane nje ayifani nesilinganiso semakethe yamanje. Bona imajini kuyinto eyodwa kepha ukungashintshi izintengo ngokuya ngemakethe yamanje ngeke kukusize. Ngakho-ke qaphela ngalokhu ngoba abantu banikela ngokoqobo ngamaphromoshini ngenkathi wehluleka ukwengeza umkhiqizo wakho (ngomqondo othile). Futhi, lokhu kungasiza ukukhulisa ukuthengisa kwakho ku-Amazon.
Qaphela amagama angukhiye athrendayo oMkhiqizo wakho
Igama lokusesha lomkhiqizo ngamunye lingashintsha isikhathi esengeziwe. Futhi, kuliqiniso elishiwoyo ukuthi ukuhlelwa kwamagama asemqoka aphezulu kungaba nzima. Lesi yingakho umuntu kufanele anake amagama asemqoka athrendayo. Kungani? Yebo, umphakathi oku-inthanethi usebenzisa kakhulu amagama angukhiye ahamba phambili. Futhi ngenkathi ivolumu yokusesha iphezulu ngegama elingukhiye elihle, umncintiswano nawo uzophakama kepha kokusha nokuthrendayo, kumayelana nokubamba ithuba. Lokhu akusebenzi ku-Amazon kuphela kepha nakuGoogle futhi. Cabanga ngokwenza umkhiqizo wakho unconywe kubantu ngqo ngenkathi usesha.
Vumelanisa leyo Inventory
Yebo, kunenqwaba yabathengisi manje abasebenzisa indlela eku-inthanethi ukuthengisa imikhiqizo yabo. Futhi, kunabathengisi abaningi abanama-akhawunti kuzingxenyekazi ezingaphezu kweyodwa ze-e-commerce kufaka phakathi i-Amazon. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uvumelanise uhlu lwakho. Ake sithi uthengisa umkhiqizo A futhi uthola ama-oda afanayo kumawebhusayithi e-commerce amaningi. Kulokhu, kungangcono ukuthi umane ugcine ithrekhi yawo wonke ama-oda owatholayo ngalo mkhiqizo. Lokhu kuzokusiza ukuthi ugcine uhlu lwakho luhambisana nemiyalo oyitholayo. Lokhu futhi kusho amathuba aphansi okulethwa sekwedlule isikhathi okuholela ekugcineni ekunikezelweni kwamakhasimende okuhle. Futhi, impendulo enhle kakhulu yokuthi ungakhuphula kanjani ukuthengisa ku-Amazon ukumane ugcwalise izidingo zekhasimende lakho.
Thuthukisa ukuthwebula izithombe zomkhiqizo wakho
Kubukeka kuyikho konke! okungenani lapho uthi nhlá. Futhi, lokhu kuyinto okufanele wonke umuntu ayigcine ekubhekeni emuva, kungaba impilo noma umkhiqizo. Ukumaketha komkhiqizo kudlulele ngale kwezinyathelo ezijwayelekile. Kulezi zinsuku imikhiqizo idutshulwa ngochwepheshe. Futhi lokhu akunjalo ngegama elikhulu kuphela kepha nemikhiqizo emincane itshala imali ezinhlelweni zokuthwebula izithombe zomkhiqizo. Ngalesi sikhathi, kubalulekile ukuthi usebenzise isithombe somkhiqizo okungenani esicacile ne-tad bit ekhangayo. Ukuhlinzeka ngesifinyezo kusuka ku-smartphone yakho ezimeni ezimbi zombani kunoma iyiphi i-angle noma yini engeke ihehe umkhiqizo wakho. Leli thiphu empeleni lingathuthukisa ukuthengisa kwakho kwe-Amazon. Umkhiqizo obukeka uheha uhlala ungowokwethenjelwa ngabaningi. Uma umkhiqizo wakho ungabukeki kahle endaweni yesikhulumi ithuba lokuthi ukuthengisa kwawo liphansi kakhulu.
Qondanisa nezinqubomgomo ze-Amazon kanye nesikhathi semibandela
I-Amazon inolwazi kakhulu ngamakhasimende. Lokhu kusho ukuthi izinqubomgomo nemigomo eminingi yenzelwa ukunikela ngezinsizakalo ezingcono kumakhasimende. Futhi, uma ungahambisani nalezi zinqubomgomo kungamiswa i-akhawunti yakho. Futhi, ngethembe sisebenzisana nokumiswa komthengisi nsuku zonke futhi awufuni ukubanjwa ku-loop efanayo. Ngakho-ke vele udlule kulezo zinqubomgomo bese uqinisekisa ukuthi awugcini ngokuziphula. Futhi futhi lokhu kungakusiza ukuthi uthuthukise futhi ugcine izinga lomkhiqizo wakho ngokuhamba kwesikhathi.
Kuyinto yecebo eliphambili kepha inokwenza izimangaliso kwabaningi. Noma kunini lapho sivula ikhasi, kunemininingwane eminingi ngokuhamba kwedatha isivakashi esidlula kukho. Ekhasini lomkhiqizo we-Amazon, kunezinto eziningi futhi umuntu angavele aguqule i-oda futhi abone ukuthi kuyakuthinta yini ukuthengisa. Uma ufika eqophelweni lapho empeleni ubona ushintsho ekuthengiseni ungamane ulubhale phansi bese uzama ukukwenza namanye amakhasi womkhiqizo. Lolu hlobo lokuhlola lwaziwa nangokuthi Ukuhlolwa kwe-AB.
Sebenzisa i-FBA (igcwaliswe yi-Amazon)
Ungakukhulisa Kanjani Ukuthengisa ku-Amazon FBA, Thuthukisa Ukuthengiswa kwe-FBA
Uma ungunoma ubani emhlabeni kufanele ngabe uzwile nge-Amazon Prime. Yize ukuba ngumthengisi kukwenza kucishe kube yisibambiso kuwe ukwazi ngakho. I-Prime insizakalo enikezwe yi-Amazon yokunikeza ukuthunyelwa okusheshayo nokukhululekile. Kunemikhiqizo ethile enebheji ye-prime esebenza njengesitifiketi sokwethembeka. Futhi, bekulokhu ukuthi abantu bakhetha imikhiqizo ye-Prime ngokushesha kunaleyo ejwayelekile. Ngakho-ke thatha ithuba lokukhulisa umcebo wakho usebenzisa ukuthengiswa kwe-FBA.
I-Amazon uqobo ikunikeza ngemisebenzi embalwa yokuphromotha. Le misebenzi okungukuthi amadili ombani, Idili losuku, amakhuphoni e-Amazon njll. Ngenkathi ukuqhuba lawa madili kungabiza imali ethe xaxa ephaketheni lakho, inani lokuqina abakunikezayo lingabonakala kakhulu kwesinye isikhathi. Noma nini lapho othile enza ukusesha ku-Amazon, lawa madili ashiwo phezulu. Lokhu kunikeza ukubonakala okuningi kumkhiqizo wakho futhi namathuba okuthi ukwandise ukuthengisa abe phezulu.
Umuntu angathatha inzuzo yemakethe yedijithali ukukhuthaza iminikelo yabo. Kunezindlela eziningi zokusebenzisa ukuthi iyiphi engabonisa kangcono imikhiqizo yabo kangcono futhi ihambise ithrafikhi ekhasini labo lomkhiqizo. Eqinisweni, kunamawebhusayithi amaningi wedili avame ukulangazelela ukuphusha imikhiqizo yokuphromotha. Sebenzisa ikhanda lakho kahle futhi kungakusiza ukuthi imikhiqizo yakho iqokonyiswe kuzo zonke izindawo ezingakhona.
Wina Ibhokisi Lokuthenga
Ubuwazi ukuthi abanye abathengisi bangathumela uhlu lwabo lomkhiqizo ebhokisini lokuthenga lekhasi lakho lomkhiqizo? Uma kungenjalo kufanele ngikutshele ukuthi kudala umehluko omkhulu ekuthengisweni kwakho. I-Amazon ifuna ukuhlinzeka konke ngentengo eshibhile ngekhwalithi engcono kakhulu. Muva nje, abathengisi abaningi bebekhononda ngokudunwa kwabo kohlu lwama-Amazon. Lokhu kwenzeka lapho omunye umuntu athumela umkhiqizo ofanayo ebhokisini lakho lokuthenga ngentengo eshibhile. Lokhu ngokusobala kuthinta ukuthengisa kwakho futhi ukukhushulwa kwakho kugcina kuzuzisa omunye umuntu. Ukuze uqiniseke ukuthi awuthinteki kuyo mane uzame ukunikeza intengo engcono nomkhiqizo wangempela. Iningi lalaba baduni lithengisa imikhiqizo ethunyelwe ngesikhathi semicimbi yokuphromotha noma ukulingiswa okushibhile komkhiqizo wakho. Uma ufisa ukufunda kabanzi mayelana Ukudunwa Kokufakwa ohlwini kwama-Amazon bese umane uchofoze kusixhumanisi esinikeziwe.
Sebenzisa Amathuluzi Okubekisa nge-Amazon
I-Amazon inikeza ngamathuluzi ahlukahlukene amahle ukukusiza ukuthi uthuthukise umkhiqizo wakho kangcono. Lawa mathuluzi anganikeza isikhalazo esikhulu ekhasini lakho lomkhiqizo uma ucabanga ukuthi umncintiswano awusebenzisi kahle kakhulu. Isibonelo esivame ukusetshenziswa kulawa mathuluzi i-A + Content. Ngaphandle kwalokho kunabanye futhi Isitolo sangaphambili se-Amazon, Imikhiqizo exhasiwe, i-Amazon Attribution njll
Thatha izinzuzo zabathonya
Kulesi sikhathi nesikhathi ngasinye kunabantu abavamile abangabagqugquzeli. Sonke sithumela okuqukethwe ezinkundleni zokuxhumana futhi siguqula imibono nokuthandwa kwethu kube ngamathuba. Akudingeki ukuthi uqashe umuntu onamandla okususa eshalofini eliphakeme kakhulu elingase likulahlekisele ibhizinisi lakho lonke. Kepha kungcono uye kumamodeli we-Instagram, i-Youtubers, i-Facebook, njll. Laba bantu banomphakathi omkhulu kakhulu wabantu ababalandelayo okusho ukuthi uma unokuthile okuhlukile ongakunikela ngakho-ke ungagcina usudale ukuthengisa okuvulekile. Ngaphandle kwalokhu abanye babaqalayo i-Youtubers kanye ne-Instagram Influencers bangavele bakhuthaze amasampula wamahhala (ngoba babhekana nalolo hlobo lokuqukethwe). Kuyinto ekhulisa kakhulu ukufinyelela ikakhulukazi uma ungumkhiqizo.
Dala Umuzwa Omuhle Wokuthenga
Uma kusuka kumkhiqizo kuye ekulethweni, yonke into ihlelwa ikhasimende lapho-ke usendleleni efanele. Izinto seziphendukele ekuzibandakanyeni komsebenzisi / kokuhlangenwe nakho komsebenzisi. Uma ikhasimende lakho likwazi ukukufinyelela futhi likhulume nawe nganoma yikuphi ukuphazamiseka noma isikhalazo khona-ke lineza izinkanyezi enkonzweni yakho. Futhi, inani lezibuyekezo ezinhle ongazithola libuye liwine. Ngakho-ke hlala uvulekele ukujabulisa ikhasimende futhi uzobona ukuthuthuka okukhulu ekuthengisweni kwakho kwe-Amazon.
Sebenzisa iVidiyo ngomkhiqizo wakho
Kunconywa imikhiqizo eminingi kulezi zinsuku kusetshenziswa ividiyo. Uma ungakwenzi kwenze. Ingqondo yomuntu ibheka ulwazi olulula futhi olugayekayo kalula. Futhi, ividiyo ayi-no.1 kulokho kuzenzisa. Cabanga ngabantu asebephenduke izinkanyezi ezigcwele ngokugcwele ngokwakha amavidiyo kuma-smartphone abo. Ukuba nevidiyo yomkhiqizo wakho kuyindlela engcono yokuwukhangisa.
Thola iBesteller yakho bese uyiphinda kabili
Elinye iqhinga elisobala abantu abavame ukulahlekelwa ukulihlala liwukubheka abathengisa kakhulu. Ukugcina isheke elihloniphekile kuhlu lwempahla nokuphindwe kabili kwabathengisa kakhulu kungaba yimpendulo yakho kokuthi Ungakhuphula kanjani ukuthengisa ku-Amazon. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlala uvuselelwa futhi ugcine uhlu lwakho lomkhiqizo lubhekiwe.
Sebenzisa iMedia Media
Indlela enhle yokukhiqiza ukuthengisa okuningi ku-Amazon ukugqamisa umkhiqizo wakho ku-Social Media. Ungaqasha umklami bese uthola amabhanela ezokuxhumana nabantu. Lezi zibhengezo zingasetshenziselwa Izikhangiso Zomphakathi. Ngama-hashtag afanelekile namagama-ncazo angabanjwa, kungathola ukuqashelwa okuhle komkhiqizo wakho nokuthengisa ekugcineni kosuku.
Okwamanje kumele ngabe uqonde ukuthi ukuba ngumthengisi we-Amazon kungumsebenzi onzima. Futhi, iseluleko esihle kakhulu kuleso sivumelwano engingasinikeza ukukhipha insiza. Ungenzi insizakalo yakho ibe budlabha esikhundleni sokuqasha abantu ukuxazulula izinkinga ongenakukwazi ukuzenza. Noma umane ongenaso isikhathi sakho. Ukusuka ekuphatheni i-inventory kuya ekulethweni nasekuhleleni, konke kungakhishelwa kwamanye amasevisi. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuphatha konke ukusebenza ngobunye. Vele lokhu kusebenza kangcono nabantu abazama ukusungula uphawu. Kepha kwezinye izingqinamba, kumane kungcono ukukhipha ulwazi. Akuwona umsebenzi olula ukuthi noma ngubani asinde e-Amazon. Noma, uma uzama ukugxilisa lezi zeluleko ezinikezwe kungakusiza ngemfuno yakho yokuthi Ungakhuphula kanjani ukuthengisa ku-Amazon. Uma ufuna umuntu ongakusiza ngakho konke lokhu siyikho I-APlus Global Ecommerce. Ngokuyinhloko sisevisi yokukhalaza yokumiswa kwe-Amazon kepha ngaphandle kwalokho sinikeza nezinsizakalo ezifana Ucwaningo Lomkhiqizo, Ukuhlonza Abahlinzeki, i-Amazon PPC, Ukukhuthaza Ukuthengisa (Igama Elikhokhelwayo), Isu Lempendulo, njll.. Uma unesithakazelo ungavakashela ikhasi lethu eliyisiqalo bese uthola ukubonisana kwakho kokuqala mahhala Ungayandisa Kanjani Ukuthengisa Ku-Amazon. Siyethemba ukuthi le ndatshana kungenzeka ibe usizo kuwe. Futhi, ngiyabonga ngokuyifunda kuze kube sekupheleni.
Umhlahlandlela Wokumiswa Komthengisi we-Amazon: Amathiphu Wokugwema Ukumiswa Nokubuyisela i-Akhawunti Yomthengisi
Izinto Ezingu-10 Okungafanele Zenziwe Ngemuva kokuthi Kumiswe i-Akhawunti Yomthengisi ye-Amazon
I-akhawunti ye-Amazon imiswe okwesikhashana ngokuthunyelwa kwempahla?
Izindlela ezi-3 eziphezulu zokugwema ukudunwa kohlu lwama-Amazon